उठ्न थाले भत्काईएका संरचना – News Portal
उठ्न थाले भत्काईएका संरचना
December 17, 2018 epradeshLeaveaComment on उठ्न थाले भत्काईएका संरचना
तुलसीपुर, २ पुस । बजार संरचना व्यवस्थित गर्नका लागि सञ्चालन गरिएका अभियानहरुले पूर्णता पाउनुको साटो पुनर्जिवित बन्दै जान थालेका छन् । साँघुरो बजार संरचनालाई सुन्दर र फराकिलो बनाउन हटाईएका संरचनाहरु ढड्याउन थालिएको छ ।
आफैले हटाएका संरचना पुनः उठ्न थाले पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भने मौन छ । कुनै चासो दिन नसकेको देखिएको छ । अभियान तथा योजनाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै पुरानै गतितर्फ बजारको स्वरुप फर्किदै जान थालेपछि नागरिक तथा स्थानीयबासीहरुले समेत आलोचना गर्न थालेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सडक मिचेर बनाएका टहरा, भ¥याङ हटाएको थियो भने सडक ब्यापार बन्द गराएको थियो । अहिले हटाइएका संरचना फेरि निर्माण भएका छन् भने सडक ब्यापार पनि बन्द भएको छैन । घरधनी र व्यापारीहरुले पुनः टहरा, भ¥याङ र सडक व्यापार राख्न थालेका छन् । तुलसीपुरस्थित सितलपुर रोडमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका हार्डवेयर व्यवसायी राजु नेपालीले सबैले एकैसाथ हटाएका टहराहरु कतिपय व्यवसायीहरुले पुनः प्रयोगमा ल्याएको बताए । स्थानीय सरकारको कामलाई हामी सबैले साथ दिन आवश्यक छ, तर कतिपयले यसको कार्यान्वयन नगर्दा हामीलाईसमेत आलोचनात्मक कुरा गर्न मन लाग्छ, उनले भने नियम कानून सबैलाई लागू हुनु पर्ने होइन र ? बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि थालिएका सबै कार्यहरु के कति लागूभएका छन् भनी निगरानी गनुपर्ने रहेको नेपालीले बताए । घर छेऊमा एक व्यवसायीले हटाईएका टहरा पुनः राख्ने तर अर्का व्यवसायीले भने पाली नराखेको देख्दा आफूलाई समेत अचम्म लागेको स्थानीय चन्द्रकला देवकोटाले बताइन । चार पाँचवटा पसल लहरै गाँसिएका छन्, सँगसँगै सबैका टहराहरु हटाईएका हुन् तर आधा पसलेले पाली राखी सके आधाले राखेका छैनन्, उनले भनिन्– ‘नियम सबैमा लागू हुनुपर्दछ, योजना सफल बनाउन निगरानीको पनि आवश्यकता पर्दछ । उपमहानगरले सञ्चालन गरेको स्मार्ट सिटीको यो रुप फेरिएन ।
अहिले हटाइएका संरचना फेरि निर्माण भएका छन् भने सडक ब्यापार पनि बन्द भएको छैन । घरधनी र व्यापारीहरुले पुनः टहरा, भ¥याङ र सडक व्यापार राख्न थालेका छन् ।
त्यस्तै नीति र नियमलाई कार्यान्वयन कसरी गराउनु पर्दछ भन्ने विषयमा उपमहानगरपालिका संवेदनशील भएर लाग्नु पर्ने वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाहले बताए । नगर प्रहरीको व्यवस्था नसक्दा सञ्चालन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु पूर्णरुपमा सफल हुन नसक्ने बताए । कार्यपालिकाले बैठक बसी नगर सभामा पठाएको भएपनि उपमहानगरपालिकाले यसको विषयमा कुनै चासो नदिएको बताउँदै उनले भने– ‘नगर प्रहरी भर्नाका लागि गत वर्षनै बजेट छुट्याइएको भएपनि अहिलेसम्म नगर प्रहरीको कुनै व्यवस्था भएको छैन, कर्मचारीहरु सधँै फिल्डमा धाउन समय मिल्दैन त्यसैले नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिन आवश्यक छ ।
संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन भएता पनि पुनः फालिएका सडक बजार र टहर भ¥याङहरु पुनः प्रयोगमा आइरहेको आफूले पनि पाएको बताए । तुलसीपुर–घोराही सडकखण्ड नजिकै पनि हटार्ईएको भ¥याङ पुनः निर्माण गरिएको बताउँदै उनले बजारको बेथितिलाई व्यवस्थित गर्न उपमहानगर संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बताए । आवश्यक जनशक्ति र नगर प्रहरीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसको व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । अभियान सञ्चालन गरेपनि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न नसक्दा यसले पूर्णता नपाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले बताए । विविध समस्याले गर्दा यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउँदै उनले आम नागरिकले सकारात्मक भएर साथ दिन आवश्यक रहेको बताए । हामीले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि अभियान तथा कार्यक्रमहरु उपमहानगरपालिकालाई मात्र आवश्यक पर्ने जस्तो देखिएको छ, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका तथा लागू गरेका नीति नियमहरुलाई परिपालना गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुको दायित्व हो, उनले भने– ‘हामीसँग जम्मा दुईवटा नगर प्रहरी छन्, अनुगमनकर्ताहरु समय–समयमा अनुगमनमा हिँडे पनि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नहुँदा यो प्रभावकारी भएको छैन । सेवा र सुविधा कसरी उपयोग गर्न पाईन्छ ? भन्ने विषयमा नागरिकहरुसमेत जिम्मेवार बन्न आवश्यक भएको सारुको भनाइ छ । आफ्नै क्षेत्र व्यवस्थित र व्यवस्थित बनाउनका लागि बनाइएको नीति नियमलाई नागरिकले परिपालना नगर्दा उपमहानगरपालिका र स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई मात्र दोषी देख्न नहुने उनले बताए ।
लागूपदार्थ शिक्षाको पाठ्यक्रम
खाली हुँदै फुर्केसल्ली
August 28, 2018 epradesh